Posted on February 26, 2016 by bishownath
मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाइ हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ भने झण्डै दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित छन् । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षत्रको योगदान ३३ दशमलव १२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ३२ दशमलव १२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा आधारभूत मूल्यमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिमा १ दशमलव ८५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । विगत वर्षहरुमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन गएको रोजगारी अवसर र मुलुकलाई समष्टिगत रुपमा प्रदान हुने खाद्य सुरक्षाको कारण अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहन गएको हो । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण तथा विविधीकरण गरी तुलनात्मक लाभ एवं प्रतिस्पर्धाको लागि सक्षम बनाउनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरी बहुसंख्यक कृषक समुदायको जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार ल्याउन कृषि विकासका कार्यक्रमहरु केन्द्रित रहेका छन् । खाद्यान्न बालीहरु धान, मकै, गहँु, जौ, कोदो, फापर आदिमा भएको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिले नेपालको खाद्य सुरक्षामा टेवा पुगेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय आय विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेश व्यापार र रोजगारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कृषिको सर्वोपरि महत्व छ । आर्य हिन्दू संस्कृतिबाट विकसित नेपाली समाजमा धार्मिक, अन्धविश्वास, रूढीवादी तथा कुसंस्कृतिले जरो गाडेको छ । यहाँ शिक्षा र चेतनाको क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन् । यसैले गर्दा हाम्रा पुर्खाहरुले गरिआएको परम्परालाई नै पछ्याउँदै आएका छौं । यो नै हाम्रो पछौटेपन हो । यसकारण कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण ल्याउन नयाँ प्रविधि, ज्ञान, सीप आदिको विकास गराउँदै लैजानु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । मुलुकको कुल परिवार संख्या ४२ लाख ५३ हजार २ सय २० संख्यामध्ये ४१ दशमलव ४ प्रतिशत अति साना कृषक समूह र ३० दशमलव ८ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्न एवं उत्थान गर्नमा पनि यस व्यवसायले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।
मुलुकको आव २०७१÷०७२ को खाद्यान्न बालीहरुको क्षेत्रफल धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरको क्रमशः १४२५३४६, ८८२३९५, ७६२३७३, २६८०५०, २८०५३ र १०८१९ हेक्टर रहेको अनुमान छ । गत वर्षको तुलनामा धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौं र फापरको क्षेत्रफलमा घटीबढीमा प्रतिशतको आधारमा अवलोकन गर्दा क्रमशः –४.१४, –४.९९,–०.४३, २.९४, –०.४३, र २.९४ रहेको अनुमान छ । देशमा चालू आर्थिक वर्षको कुल खाद्यान्न बालीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी खेती गरिएको धानको क्षेत्रफल १४ लाख २५ हजार ३ सय ४६ हेक्टर रहेको अनुमान छ । त्यस्तै गरी कुल खाद्यान्नमध्ये सबैभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गरिएको फापर बालीको १० हजार ८ सय १९ हेक्टर रहेको छ । त्यस्तै गरी सोही बालीको सो समयमा उत्पादन भने क्रमशः ४७८८६१२, २२४५२९१, १९७५६२५, ३०८४८८, ३७३५४ र १०८७० मेट्रिकटन रहेको अनुमान गरिएको छ । उत्पादनलाई पनि गत वर्षको तुलनामा धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरको क्षेत्रफलमा घटीबढीमा प्रतिशतको आधारमा अवलोकन गर्दा क्रमशः –५.१२, –१.६६, ७.२७, ५.१८, ७.२७ र ५.१८ रहेको अनुमान छ । देशमा चालू आर्थिक वर्षको कुल खाद्यान्न बालीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी खेती गरिएको धानको उत्पादन भने ४७ लाख ८८ हजार ६ सय १२ मेट्रिकटन रहेको अनुमान छ । त्यस्तै गरी कुल खाद्यान्नमध्ये सबैभन्दा कम उत्पादन भएको बाली भने फापर बालीको १० हजार ८ सय ७० मेट्रिकटन रहेको छ । त्यस्तै गरी चालू आर्थिक वर्षको सोही समयमा सोको उत्पादकत्व भने क्रमशः ३३६०, २५४५, २५९१, ११५१, १३३२ र १००५ प्रतिकिलो हेक्टर रहेको अनुमान छ । देशमा चालू आर्थिक वर्षको कुल खाद्यान्न बालीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व भने धानको उत्पादकत्व ३ हजार ३ सय ६० प्रति केजी हेक्टर रहेको अनुमान छ । त्यस्तै गरी सोही समय र सोही अवधिमा कुल खाद्यान्नमध्ये सबैभन्दा कम उत्पादकत्व भने फापर बालीको १ हजार ५ प्रतिकेजी हेक्टर मात्र रहेको उल्लिखित आँकलनबाट स्पष्ट हुन्छ ।
देशको आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को खाद्यान्न बालीहरुको क्षेत्रफल धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरको क्रमशः १४८६९५१, ९२८७६१, ७५४४७४, २७११८३,२८१७३ र १०५१० हेक्टर रहेको अनुमान छ । त्यस्तै गरी धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरको क्षेत्रफलको योगदानलाई प्रतिशतको आधारमा अवलोकन गर्दा क्रमशः ४२.७३, २६.६९, २१.६८, ७.७९, ०.८१ र ०.३० रहेको अनुमान छ । त्यसैगरी उत्पादनतर्फको योगदानलाई पनि मध्यनजर गर्दा क्रमशः ५२.७८, २३.८८, १९.६९, ३.१८, ०.३६ र ०.११ रहेको आँकलन सम्बन्धित क्षेत्रको रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी सोही बालीको सो समयमा उत्पादन भने क्रमशः ५०४७०४७, २२८३२२२, १८८३१४७, ३०४१०५, ३४८२४ र १०३३५ मेट्रिकटन रहेको गरिएको छ ।
निचोडमा भन्नुपर्दा जबसम्म कृषि विकासको चौतर्फी विकास हुँदैन, तबसम्म देशको निर्माण हुन सक्दैन । त्यसको लागि सरकार, सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज आदिले यस क्षेत्रमा युद्धस्तरमा संघर्ष गर्नुपर्ने आजको टड्कारो महसुस हुन्छ । देशको अर्थव्यवस्था बलियो बनाउन यसको महत्व निकै देखिन आउँछ । यस खेती प्रणालीको प्रभावकारी अवलम्बनको लागि जति अनुसन्धानकर्ताको हात हुन्छ, त्यसभन्दा पनि बढी कृषि कर्म गर्ने कर्ताको हात हुन जान्छ । तसर्थ यसको विकासको लागि सरकार, सम्बन्धित निकाय, बजेट, जनशक्ति, भूमिको छनोट, तालिम प्राप्त प्राविधिक र अनुसन्धानको साथसाथै उन्नत प्रविधि, कृषि वैज्ञानिक, ज्ञान, सीप आदि पनि सँगसँगै लगेको खण्डमा उक्त बालीमा गरेको लगानी गरेकोभन्दा बढी प्रतिफल अवश्य पनि दिने नै छ भन्नेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ । अन्त्यमा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादन (धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, फापर) को अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब क्षेत्रफलमा एक लाख तीन हजार १६ हेक्टर घटेको छ भने त्यसै गरी उत्पादनमा पनि एक लाख ९६ हजार ४ सय ४० मे.टन. अर्थात् माइन्स शून्य दशलमव ०५ प्रतिशतले घट्न गएको देखिन्छ भने उत्पादकत्वमा पनि शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत बढ्न गएको देखिएको छ, जुन २५ दशमलव ६५ केजीले बढ्न गएको उल्लिखित तथ्यांकबाट अवगत हुन्छ । साथै यस वर्ष खाद्यान्न बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल समेत माइनस २ दशमलव ९६ प्रतिशतले घट्न गई कुल क्षेत्रफल ३३ लाख ७७ हजार ३६ हेक्टर रहेको उल्लिखित तालिकामा छ । त्यस्तै गरी खाद्यान्न उत्पादन तर्फ हेर्दा माइनस २ दशलव शून्य ५ प्रतिशतले घट्न गई ९३ लाख ६६ हजार २ सय ४० मेट्रिकटन पुग्न गएको अनुमान गरिएको छ ।
त्यसरी नै उत्पादकत्वमा भने चालू आर्थिक वर्षको दाँजोमा शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत बढ्न गएको उल्लिखित आँकलनबाट स्पष्ट हुन्छ । अर्थात् चालू आर्थिक वर्ष प्रतिहेक्टर २ हजार ७ सय ७४ किलोग्राम उत्पादकत्व छ भने गत वर्ष २ हजार ७ सय ४८ प्रतिहेक्टर किलोग्राम थियो, जसमा २५ दशमलव ६५ किलो बढी हो । विनाशकारी महाभूकम्प, चरम खडेरी, मधेस आन्दोलन र पछिल्लो चरणमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा कृषिक्षेत्रले १० अर्ब रुपैयाँबराबरको धान उत्पादन गुमाउनुपरेको छ । आ.व. २०५९÷०६० सम्म नेपालले चामल आयात गर्नुपरेको थिएन, तर आज देशले प्रतिवर्ष २५ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्दछ । कृषिप्रधान मुलुकको लागि यो श्रृंखला अत्यन्तै दुःखदायी हो । चालू वर्षका बर्खे बालीनालीहरूको उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमानबारेको अध्ययन गर्ने क्रममा कृषि विकास मन्त्रालयले एक सर्वेक्षण मूल्यांकन गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार धानको उत्पादन गतवर्षको तुलनामा आ.व. २०७२÷०७३ मा १०.२२ प्रतिशतले ह्रास आएको छ, जुन झन्डै ४ लाख ८९ हजार मे.ट. को अंश रहेको छ । गतवर्ष ४७ लाख ८८ हजार मे.ट. धान उत्पादन भएको थियो, तर यस वर्ष ४२ लाख ९९ हजार मे.ट मात्र उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष तराई र पहाडका गरी ४३ जिल्लामा धानको उत्पादन घटेको छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तराईमा पर्ने २० जिल्लामध्ये सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र कपिलवस्तुमा धानको उत्पादन १५ प्रतिशतले घटेको छ ।
मध्यपहाडी भागका अधिकांश जिल्लामा पनि धान उत्पादनमा ह्रास आएको छ । चरम खडेरीका कारण यस वर्ष मधेसलगायतका क्षेत्रमा लगाइएको धानबाली किसानले काट्नसमेत पाएनन् । मुलुकमा धानबाली उत्पादन हुने कुल क्षेत्रफलसमेत यस वर्ष करिब ६१ हजार हेक्टरले घटेको छ, जुन विगत १५ वर्षयताकै सबैभन्दा कम क्षेत्रफल हो । यो क्षेत्रफल गतवर्षको तुलनामा करिव ४ प्रतिशतले न्यून छ । यस वर्ष प्रतिहेक्टरमा हुने उत्पादनमा समेत गतवर्षको तुलनामा ६.११ प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्ष प्रतिहेक्टर ३ हजार १ सय ५४ किलोग्राम धान उत्पादन भएको छ भने अघिल्लो वर्ष यो स्थिति ३ हजार २ सय ६० किलोग्राम रहेको थियो । देशको धानबाली उत्पादन घट्नुमा धेरै कारण विद्यमान छन् । सरकारी नीति स्पष्ट र कार्यान्वयन नहुनु, मौसममा हुने गडबढी, कमजोर मनसुनका कारण समयमा रोपाइँ हुन नसक्नु, पशुपालनमा कमी, कृषिमा जनशक्तिको अभावका कारण प्रतिवर्ष खेत बाँझो रहने क्रम बढ्दै जानु, रोजगारको खोजीमा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, रासायनिक मल सहज नहुनु, खडेरी पर्नुलगायतका कारणहरू छन् । यस वर्ष मधेस आन्दोलनले गर्दा यातायातसमेत प्रभावित भएपछि करिब ४० प्रतिशत किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सम्भव भएन । यस वर्ष औसतभन्दा कम अर्थात् ७६ प्रतिशत मात्र वर्षा भएको छ । औसतभन्दा कम वर्षा र वर्षासमेत असन्तुलितरुपमा भएकोले धानबाहेक कोदो औसत नेपालीहरूमा दुवै छाक भातै मात्र खाने प्रवृत्ति बढी भएको कारण यस वर्ष मुलुकको जनसंख्यालाई झन्डै ८ लाख मे.ट. चामल थप आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । गतवर्ष नेपालले १ खर्ब ३७ अर्ब हाराहारीको धान–चामलसहित कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो ।
Source : http://www.aarthikdainik.com.np/news_details/14932/.html-721114.